November 26, 2020 Farah Abdulkadir Mohamed 2
GAROOWE(P-TIMES) – Warsidaha PuntlandTimes wuxuu ogaaday in ay Puntland sharuudo ku xirtay in ay la laabato xubnaha 2da ah ee laga cabanayo laguna eedeynayo in ay katirsan Madaxtooyada Puntland, kuwaas oo ku jira Guddiyada doorashooyinka Heer Federaal ee uu magacaabay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
22-kii bishan ayay ahayd markii Midowga Musharaxiinta ku shirsan magaalada Muqdisho ay u jeediyeen madaxda Puntland & Jubbaland in ay la laabtaan xubnaha cabashada ay ka qaban oo dhan 4 xubnood, oo ay ku jiraan xubno katirsan shaqaalaha rayidka ah ee labada dawlad gobaleed.
Puntland ayaa xubnaha laga cabanayo ay kala yihiin Agaasime kuxigeenka Madaxtooyada & Lataliyaha Madaxweyne Deni, waxaana mucaaradku ay sheegeen in xubnahaas ay yihiin kuwa toos uga amar-qaadanaya Madaxtooyada.
Warsidaha PuntlandTimes wuxuu ogaaday in Madaxweyne Deni uu sheegay in xubnahan uu ka laabanayo, haddii guddiga oo dhan dib loo eegayo dhanka Federaalka iyo dhammaan dawlad gobaleedyada, ayna taas oo kaliya dhabaha u xaari karto in xubnaha Puntland wax ka bedel lagu sameeyo.
Xogta ayaa sheegaysa in aysan Puntland muhiimad weyn u arkin bedelaada xubnaha oo ay yeelayso, haddii ay dhankooda ka fusho dhinacyada Villa Soomaaliya & Dawlad gobaleedyada kale, waxaana mucaaradku ay doonayaan in ay xooga saaraan sidii xubnaha guddiga doorashada wax looga bedeli lahaa.
Haddii isku dayga ku saabsan wax ka bedel Guddiga doorashooyinka Heer Federaal ee ay doonayaan mucaaradka la meelmariyo, hanaanka doorashooyinka loo madlan yahay ayaa noqon doona mid ay ku wada qanacsan yihiin musharaxiinta Madaxweyne-nimada iyo kuwa xildhibaanada raadinaya, iyadoo hadda uu si adag ku socdo loolanka Madaxtinimada.
Maxay sameyanaysaa Shaqsi puntland ah oo Shaqsi kale oo punland ah lagu badalo. Waxaa dhici karta in shaqsiyaadka ay diidan yihiin kuwa uuga culus ay booska buuxiyaan.
Tan kale sheeko muucaaradka u taal ma aha cida ay puntland gudiga u matalanayso.
Hadii nacnacda laga yeelo…. quraafaadku meesha kuma joogsanayo…… oo waxay beri ku xijin Kan badal oo kaas siib.
Tan kale…. maxaa loo oran waayey ayaguna in ay badalaan xulka ay isku haleynayaan